अपाङ्गता भएकी छोरीको गर्भ रोक्न संगिनी सुई ! |
अपाङ्गता भएकी छोरीको गर्भ रोक्न संगिनी सुई !
प्रकाशित मिति :2018-06-03 15:14:14
– इन्द्रसरा खड्का
ललितपुर । टिनले बारेकोे छाप्रो । वरिपरि ठुला ठूला पक्की घरले घेरिएको छ । नजिकै छ भुकम्पले भत्काएको घरको भग्नावशेष । छाप्रोमा झ्याल छैन । न त बलियो ढोका नै छ ।
ढोका काठको पल्लाको सट्टा प्लाष्टिकको पर्दा झुण्ड्याइएको छ । देशकै केन्द्रीय राजधानीको एक परिवारको बासस्थल हो यो । काठमाडौंको टोखास्थित यो घरमा २ आमा छोरी बस्छन् । आमा र छोरी दुबै अपाङ्ग । बुबा पनि सुस्त मनस्थिती । बोल्न पनि सक्दैनन् । उनी प्राय घरमा बस्दैनन् । बासको पनि ठेगान हुँदैन । कहिले घर, कहिले सडकको पेटीमै उनी रात बिताउछन् । सरकारले दिएको अपाङ्गता परिचय पत्रमा आमाको अवस्था सुस्त मनस्थिती लेखिएको छ । छोरीको चाँही छोरी बौद्धिक अपाङ्ग ।
जेठको पहिलो साता त्यहाँ पुग्दा आमा र छोरी खाना खाँदै थिए । ‘घरमा को हुनुहुन्छ ?’ हाम्रो आवाजपछि छोरी निस्किइन् । उनको आवाज स्पष्ट थियो ।
त्यहाँ हामी नयाँ भयौं । उनी हामीलाई देख्ने बित्तिकै एकैछिन् टोलाईन् । प्रश्न गर्यौं, ‘आमा खै ? खाना खायौ ?’ हामीले प्रश्न माथि प्रश्न थप्यौं । उनले बुझेको प्रश्नको उत्तर पनि दिँदै गईन् ।
खाना खाइसकेपछि आमाले घरको भित्र लगिन् । सुकुल ओच्छ्याईन् । अनि हामीलाई बस्न इसारा गरिन् । छाप्रोभित्र एकापट्टी खाना पकाउने ठाउँ रहेछ अर्को कुनामा सुत्ने ठाउँ । राम्रोसँग बस्ने ठाउँ पनि थिएन । हामीले सकेसम्म युवतीकी आमालाई बुझाउँदै कुरा सुरु गर्यौं ।
लर्बरिएको लबजमा अामाले जवाफ दिन थालिन् । हातको इसारा लगाउँदै छोरीबारे भनिन् । उनका अनुसार छोरी अहिले २७ वर्ष पुगिन् । के राम्रो, के नराम्रो उनलाई थाहा हुँदैन । दिएको खानेकुरा खाने, भोक लागेको पनि थाहा हुँदैनथ्यो । उनको अनुसार बेला बेला छाेरी कता जान्छिन् आमालाई पनि थाहा हुँदैन ।
कहिले राती घर आउँछिन् कहिले आउँदिनन् । आमाले थपिन् ‘ कहाँ जान्छे के गर्छे ठेगान हुँदैन । कहिले हिँड्दै गरेको मान्छेलाई हिर्काउँछे कहिले गुड्दै गरेको गाडीमा ढुंगा हान्छे ।’
अपाङ्गता भएकै कारण उनी यौन हिंसामा समेत पर्ने गरेकी छिन् । घरमै आएर पनि छाेरीलाई बलात्कारको प्रयास समेत भएको आमाले बताईन् । उनका अनुसार एकदिन खाना पकाइरहेको बेला एक जना केटा घरमै आएर छोरीलाइ जबरजस्ती गर्यो । कोठाभित्रै पसेर जबरजस्ती गर्न थालेपछि छाेरी चिच्याइन् । वरपरका मान्छे जम्मा भए । त्यसपछि केटो फरार भए ।
त्यति मात्रै होइन कहिले घरमै गाडी ल्याएर केटाहरुले छाेरीलाई लिएर पनि जाने गरेका छन् । केटाहरुले घरमै आएर छाेरीलाई लैजाँदा अपाङ्ग आमा बिरोध गर्न सक्दिनन् । न त आफ्नी छोरीको सुरक्षा नै ।
स्वास्थ्य चौकीमा तीन महिने सुई लगाएको कार्ड
बरु छोरीको गर्भ नबसोस् भन्दै परिवारले नै उनलाई गर्भनिरोधक तीन महिने सुई लगाईदिएका छन् । ३/३ महिनाको फरकले सुई लगाउनुपर्ने भएकाले अब डाक्टरले साउन २१ गते सुई लगाउने अर्को मिति तोकिदिएका छन् । बैशाख २१ गते सुई लगाएकाले अब साउन २१ गते छोरी लिएर जाने उनकी आमाले भनिन् ।
यौनजन्य हिंसामा पर्दा गर्भ बस्ने डरले गर्भनिरोधक डिपो सुई लगाउन थालेपछि छाेरी मोटाउँदै गएकी छिन् । तौल बढ्दै गएपछि अहिले हिँड्न गाह्रो हुने, हात खुट्टा दुख्ने गरेको पनि उनीले आमासँग गुनासो गर्ने गर्छिन् ।
अपांगता परिचयपत्र हातमा, भत्ता पाउन सकेनन्
उनका ५ परिवार मध्ये ३ जना अपाङ्गता भएका र एक छोरा र बुहारी मात्र सवलाङ्ग छन् । तर, छोरा बुहारी तीन अपाङ्गता भएकाहरुसँग बस्दैनन् ।
सवलाङ्ग एक छोरा पनि अलग बस्दा उनीहरु रेखदेख गर्नेहरुको पनि समस्या छ । अपाङ्गता भएका आमा, बुवा र छोरी तीनै जनाको अपागता परिचय पत्र छ । २०६५ सालमा अपाङ्गता परिचय पत्र बनाए पनि उनीहरुले भत्ता रकम भने पाएका छैनन् ।
परिचय पत्र पाइसकेपछि २०६५ सालको असार र साउनमा उनले १ हजार रुपैयाँ सेवा पाएकी छन् । भने उनका श्रीमानले एक महिनाको ६ सय रुपैयाँ मात्रै सेवा पाएका छन् । छाेरीले त अहिलेसम्म रकम पाएकी छैनन् ।
बौद्धिक अपाङ्गता महिलालाई गर्भनिरोधक साधन
अपाङ्ग महिला संघका अध्यक्ष निर्मला धितालले बौद्धिक अपाङ्गता भएका महिला नकै जोखिममा रहेको बताइन् । उनीहरुलाई सुरक्षित राख्न अथवा गर्भ बस्न नदिनको लागि अधिकांश सबैका परिवारले परिवार नियोजनका अस्थायी साधन प्रयोग गराइरहेको उनको भनाइ छ ।
अध्यक्ष धितालले भनिन्, ‘बाहिर खुलेर परिवारले जानकारी नगराए पनि प्रयाजसो बौद्धिक अपांगता भएका महिलाहरुको सुरक्षा परिवार नियोजनको अस्थायी साधन डिपो, नरप्लान्ट हुने गरेको छ ।’